DAAWO MUUQAAL: Ciidanka Puntland oo Qabsaday QANDALA iyo Halkay uga baxeen mintidiintii Daacish ee Qabsaday Qandala in yar riro ahaan lagu qiyaasay 80 ayay ahayen!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO DAAWO MUUQAAL: Ciidanka Puntland oo Qabsaday QANDALA iyo Halkay uga baxeen mintidiintii Daacish ee Qabsaday Qandala in yar riro ahaan lagu qiyaasay 80 ayay ahayen!!
DAAWO MUUQAAL: Ciidanka Puntland oo Qabsaday QANDALA iyo Halkay uga baxeen mintidiintii Daacish ee Qabsaday Qandala in yar riro ahaan lagu qiyaasay 80 ayay ahayen!!
Dec 07, 2016MAQAALO, MUUQAAL
Magaalo Xeebeedka Qandala ee Gobolka Bari, waxaa bilooyinkii lasoo dhaafay haystay 60 ilaa 80 Nin oo ka tirsan Kooxda Daacish, Waxaana maanta Suura Gashay inay dib u qabsadaan Ciidanka maamulka Puntland kuwaasi oo Dhulka iyo Badda Weerar uga soo Qaaday mesha ay Mintidiintaas haysteen.
Sida la Xaqiijiyey Kooxdas Daacish ee Halkaasi Qabsaday ayaa Galay Buuraha ku dhow magaalada Qandala, Waxaana Suuro gal ah hadii ay Ciidanku dib uga noqdaan inay Halkaasi kusoo Noqdaan, iyadoona ay adag tahay in Buuraleyda lagu dagaalamo.
halkaas oo ay halis wayn ka imaan karta Putland waxay ubaahantahay in ay sameyso xariir caalami ah si ee u helaan diyaraha wax basaasa iyo diyaaradaha Dagaalka LAAKIIN Putland hadii lagu cabin alahaa Diyaarahaas waxay dagaal kula galeysaa maamulada Dariska la ah sida lagu bartay.
Previous PostShaqo joojinta dhakhaatiirta dalka Kenya oo gashay maalintii saddexaad iyo daryeel xumo soo wajahday Isbitaalada Dowlada Kiinya!! Next PostDowlada Sacuudi Carabi oo saldhig weyn oo Milateri ka sameysaneysa dal Xeebeebeedka Jabuuti!!